Ndị na - emepụta ihe na ndị na - ebupute ya - China Headphone Factory
FITHEM KS-017 wireless neckband Bluetooth headphone type-c nkwụnye batrị nwere ike ịkwado nnukwu isi egwuregwu egwuregwu
Batrị ahụ bụ 110mAh nwere ike igwu egwu Music 8-10 awa ma ọ bụ ya mere ogologo ọrụ ogologo mmiri na-enweghị mmiri IPX5 CE, BIS na asambodo metụtara ya nwere ike ịkwado ogo ya. Earphone Center Control Neck Hang Place bụ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ anọ nwere nghọta karịa, ọ na - eme ka mmetụta nke onye ọrụ nwee mmetụ dị nro na ntụsara ahụ na - ejikwa bọtịnụ atọ dị mfe ma dị mma tinye igodo bụ ụda dị elu na - agagharị. na-akụda ala. Pịa abụọ bụ abụ azụ. Middle Button bụ bọtịnụ nkwụsịtụ mgbe egwu na-akpọ. Pịa abụọ bụ bọtịnụ mmalite.
FITHEM KS-015 ekweisi ntị ikuku magnetik na-adọrọ mmasị isi ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ isi Bluetooth
Nke a bụ ks-015 bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke ụlọ m nwekwara ọrụ magnetik na-arụ ọrụ ngwa ngwa iji mezuo mkpa nke ahịa ahụ, melite njirimara ọrụ nke ngwaahịa a na-egbokwa mkpa nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa.
FITHEM KS-010 Ikuku ekweisi Bluetooth nnukwu ikike ngwa ngwa ụgwọ ODM ịke isi
Ngwaahịa Ngwa Okwu Mmalite: Silica Gel material n'azụ olu belt Earplug artificial design n'ime ntị dị nnọọ nro ma daba na ntị na Horn nwere ike nweta mmetụta nke mbelata mkpọtụ anụ ahụ mgbe eriri olu emechaala ọkachamara nyocha nke ntị ntị na-egbochi mmiri dịkwa ezigbo mma IPX5 earphone n'ozuzu bụ ọlaedo ruru imewe. E nwere atọ earbuds jikọtara na ntị enyi na enyi iji mee ka ndị ọrụ nwekwuo mmasị. Ọhụrụ ọdụ ụgbọ mmiri TYPE-C na-akwụ ụgwọ.